MADDIS ABABA, Ethiopia- adaxweynaha dowladda Federaalka Somalia, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo gaabiyay safar qaadan lahaa saddex bari oo ku joogay caasumadda Waddanka Ethiopia ee Addis Ababa. Sida uu ku shaaciyay bartiisa Twitterka Madaxweyne Farmaajo ayaa safarkiisa soo gabo-gabeeyay kadib…
Share to TwitterShare to LinkedInShare to PinterestShare to Google+Share to Email MUQDISHU, Somalia- Madaxweynihii hore dowladda Federaalka Somalia, Xasan Sheekh Maxamud ayaa ka tacsiyeeyay geerida ku timid wasiirk Howlaha Guud iyo dib u dhiska dowladda Somalia, Cabaas Cabdullaah oo caawa…
Dawlada Ingiriiska ayaa Soomaaliya iyo Koofur Suudaan ugu deeqday £100 malyan maadaama abaaro ay ka jiraan labada dalba. Soomaaliya iyo Koofur Suudaan ayaa dadkoodu macaluul qarka usaaran yahay. Sidoo kale ayaa Soomaaliya iyo Koofur Suudaan waxaa ka jira colaado dadkii…
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wefti balaadhan uu hogaaminayo ayaa maanta 22 February 2017 magaalada Mudisho kaga qayb galay xaflada caleema saarka Madaxweynaha Cusub ee Soomaaliya Mudane. Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Madaxweynaha waxaa ku wehelinaayey ka qayb…
Maxkamadda sare ee Britain ayaa go’aamisay in ay sharci tahay shuruudda dakhliga ee caqabadda ku noqday kumannaan ruux oo muwaaadiniin reer Britain ah oo raba in ay lamaane yaashooda keensadaan UK. Laga soo billaabo 2012, qofka Britain u dhashay ee…
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) oo maanta lagu Caleemo Saaray Magalada Muqdisho ayaa jeediyay khudbad dhinacyo badan taabaneysay oo uu kaga hadlay Amniga, Abaaraha, Musuq maasuqa, dib u dhiska Ciidanka iyo Dagaalka ururka Al-shabaab. Waxa uu sheegay…
Wasiirka wasaaradda Amniga Puntland, Cabdi Xirsi Cali Qarjab ayaa maanta dib ugusoo laabtay magaalo Madaxda Garowe kadib safar muddo qaatay oo arrimo caafimaad ugu maqnaa dalka dibadiisa. Soo dhaweyn ayaa loogu sameeyay duleedka magaalada Garowe, wuxuuna ka hadlay xaaladiisa caafimaad…
Wasaaradda caafimaadka Puntland, ayaa maanta howlgalisay kooxo adeegyo caafimaadka ka fulinaya Kaamka Shabeelle oo ku yaalla magaalada Garowe, halkaasoo ay ku nool yihiin dad-barakacayaal ah oo dhawaan lasoo daristay xaalad caafimaad darro sababtay geerida in kabadan 12 ruux. Ololahan, ayaa…
Waxaa dib u farmay Wadooyinka Magaalada Muqisho ee caasimada Soomaaliya oo loo xiray xaflada Caleemo Saarka Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo). Ciidanka Dowladda Federaalka oo wadooyinka xiray ayaa gabi ahaan furay Wadooyinka Magaalada Muqdisho, waxaana ay ka qaadeen Gaadiidka…
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaaliga ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed ayaa maanta si rasmi ah loogu caleema saarey halkii lagu doortey laba todobaad ka hor. Waxaa ka soo qayb-galay caleema saarka hoggaamiyasha dalalka deriska iyo wakiilo ka socda beesha caalamka. Madaxweyne…